उद्योग /व्यापार – Page 8 – Dhading's First Online News Portal
मुक्तिनाथको शेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं - पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लिमिटेडको २२ दशमलव ६६ प्रतिशत बोनश शेयरको समायोजनपछि मूल्य रू. १ हजार १ सय ७८ तोकेको छ । नेप्सेले कम्पनीको समायोजनको लागि आधार मूल्य रू. ९ सय ९५ लिएको हो..
अब भारतमै नचल्ने भो भारु पाँच सय र हजारका नोट
काठमाडौंः विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र रहेको देश भारतले आफ्नै देश भित्र भारु ५ सय र एक हजारको नोट प्रतिवन्ध लगाएको छ । भारतको यो निर्णयले नेपालमा समेत प्रभाव पर्ने छ । भारत संग सिमाना जोडिएका अधिकांश नेपाली वस्तिमा नेपाली भन्दा भारतीय नोट सजिलै संग चल्ने गरेको छ । भारत सरकारले मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र एक..
मुक्तिनाथले ३४ प्रतिशत बोनसपछि फेरि ४० प्रतिशत हकप्रद ल्याउने
५० प्रतिशत हकप्रद बेचिरहेको मुक्तिनाथ बिकास बैंक(MNBBL)ले ३४ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेपछि फेरि ४० प्रतिशत हकप्रद ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले प्रस्ताबित बोनस सेयर पारित गर्न र हकप्रद जारी गर्ने अनुमति लिन मंसिर ४ गते पोखरामा दर्शौ बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । संस्थापक नै तगडा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बेचेपछि मुक्तिनाथको..
खुल्यो मुक्तिनाथको हकप्रद
धादिङ–मुक्तिनाथ विकास बैंकले शुक्रबारदेखि ५० प्रतिशत हकप्रदका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । बैंकको हाल कायम सेयरधनीले कात्तिक २५ गतेसम्म आवदेन दिन सक्ने छन् । मुक्तिनाथले ४१ लाख ९२ हजार १ सय ६३ कित्ता हकप्रदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । बैंकले बुक क्लोज भनेर तोकेको भदौ ३० गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सेयर किनेका लगानीकर्ताले उक्त सेयर..
सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगारलाई भत्ता दिने
काठमाडौं २९ भदौ । सरकारले बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस भई संशोधनका क्रममा छ । सरकारले तोकेको तलबमानको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।..
फिरफिरेको बिद्युत लाईन धमाधम काटिंदै
धादिङ,१० साउन - घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै जडान गरेको बिद्युत्त लाईनबाट उद्योग व्यवसाय संचालन गरेको आरोपमा बिद्युत्त प्राधिकरणले धादिङ जिल्लाको राजमार्ग क्षेत्रमा संचालित बालुवा धुने फिरफिरेको बिद्युत्त लाईन काट्न शुरु गरेको छ । जिल्लाको गोगनपानी,बैरेनी, पिडा र गजुरी गाविसमा गरी १ सय भन्दा बढी वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग (फिरफिरे)..
पुुनर्निर्माणको ६० करोड रकम फिर्ता
श्रावण ८, २०७३- सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प पीडितका आवास पुनर्निर्माणका लागि आएको ६० करोड रकम फिर्ता गएको छ । जिल्लामा प्राप्त ७६ करोड रकममध्ये ४ गाविसका २८ सय ५९ जना लाभग्राहीलाई १४ करोड २९ लाख ५० हजार रकम पीडितलाई दिन अनुदान भए पनि बाँकी रकम फिर्ता भएको छ । ‘जिल्लामा प्राप्त उक्त वजेट गाविसहरूमा सचिव नहुनु र बस्तीमा..
१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट सार्वजनिक
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७३०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएकाे छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका सांसदमा उक्त रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको यो आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बढी हो । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको..
टुरिजम बैक संग कालिञ्चोक बैक गाभिंदै
कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंकलाई टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले किन्ने भएको छ । यी दुई बैंक बीच बुधबार किनबेचको सम्झौता भएको छ । सम्झौता टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेल र कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका तर्पmबाट अध्यक्ष बालकृष्ण सिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेका छन् । टुरिजमले यस अघि नै मातृभूिम विकास..
नोटमा केरमेट नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी
काठमाडौं, ३० फाल्गुण- नोटमा केरमेर गर्ने बानी छ अव होसियार रहनु होला । केरमेट गरिएको नोट नचलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नोटमा केरमेट तथा जथाभावी स्टिच नलगाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले नोटमा जथाभावी..
एकसोडस ट्रेकिङ एण्ड एक्पिडिसनको अध्यक्षमा रत्न मगर
काठमाडौं । प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन एकसोडस ट्रेकिङ एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.को चौथो अधिबेसनले रन्तबहादुर मगरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । बुधबार सम्पन्न अधिबेसनले उपाध्यक्षमा पेमा नुरु शेर्पा, सचिवमा ङिमा शेर्पा, सह सचिवमा फुर्बा शेर्पा, कोषाध्यक्षमा पेम्बा छिरिङ भोटेलाई चयन गरेको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा मिङमार..
बोनस वितरण नगर्न अर्थमन्त्रीको आयल निगमलाई निर्देशन
धादिङ न्यूज -नेपाल आयल निगमलाई कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । निगमले नियम विपरीत कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न लागेको जानकारी पाएपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको हो । बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३१ विपरीत व्यवस्थापनले बोनस बाँड्ने निर्णय गर्न लागेको जानकारी पाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसो..